5-ta isbeddel ee naqshadeynta websaydhka ee calaamadeeyay 2015 | Abuurista khadka tooska ah
Ciise Arjona Montalvo | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka
Sidee webku u ekaa iyo warka la keenay sanadkan 2015? Waxaan dib u milicsaneynaa qaar ka mid ah isbeddellada websaydhka ee ugu weyn sannadka. Maxaa ka dhigaya degel inuu u muuqdo mid casri ah maxaase ka dhigaya mid taariikhsan? Sannad kasta badbaado waa mid ka mid ah kuwa ugu habboon, xulashada isbeddellada shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynin. Iyadoo 2015 ay sii dhowdahay, hadda waan garan karnaa isbeddellada ugu guulaha badan ee 2015, kuwa qeexaya qaabka sanadka oo muujiya awood ku filan oo ay ku sii wataan sanadka cusub. Waa kuwan qaar ka mid ah 5 isbeddel ee naqshadeynta websaydhka ee calaamadeeyay sannadka 2015.
1 Wareeg aad u dheer.
2 Naqshadeynta kaararka.
3 Ka fikirida naqshada fidsan.
4 Animations awood leh.
5 Sawirro xiiso leh.
Wareeg aad u dheer.
Iyada oo la wareejinta moobiilka Horay uga dhaaftay desktop-ka, 2015 wuxuu arkay nashqadaha websaydhka oo riix weyn u ah shaashadaha yaryar. Sida isbeddello badan oo liiskan ku jira, rogrogmada dheer ee rogrogmada ayaa caan ku noqday utility qaabeynta, iyo rarista bogagga shabakadda.
Waagii hore, naqshadeeyayaashu waxay ka baqayeen meelaynta waxyaabaha ka hooseeya daboolka, taas macnaheedu waa, inay iyaga siisay si ay ula hadlaan in aan lagu arkin gudaha shaashadda ugu horreysa taas oo laga eegay boggooda internetka, laakiin cilmi baaris cusub ayaa muujineysa in dadka isticmaala aysan ka fikireynin inay is rogaan. Maanta naqshadeeyayaasha iyo isticmaaleyaashu waxay aqoonsanayaan qiimaha waqtiga si ay u awoodaan inay adeegsadaan wareejinta: dheeraad ah xorriyadda hal abuurka, sheeko hagaajinta, las isdhexgalka waa mid aad u xoogan, iyo marin fududeyn (haddii goobta ay ku yar tahay).
Faa'iidooyinkaani waxay leeyihiin kharash saamaynta xun ee SEO iyo Waqtiyada lacag bixinta oo dheer kuwa ugu xun. Wareeg dheer ayaa sida ugu fiican ugu shaqeeya goobaha leh taraafikada mobilada culus ama waxyaabaha ku jira soo-cusbooneysiinta sare, waana waxtar yar loogu talagalay bogagga leh warbaahinta culus sida fiidiyowyada.
Isbeddel kale oo ku saabsan naqshadeynta websaydhka ee sannadkan 2015 oo ay ku faafisay dhaqdhaqaaqa guurguura, ayaa ka mid ahaa naqshadaha kaarka markii la muujinayo a waxyaabo badan ee a hab nadiif ah y abaabulan. Tani waxay iyaga ka dhigeysaa inay ku habboon yihiin daalacashada waxyaabo kala duwan oo kala duwan, gaar ahaan isku xirka bogagga bannaanka: isticmaaleyaasha dareen leh Waxay yaqaanaan sida loo gujiyo kaarka u horseedaya boostada la xidhiidha.
Ka fikirida naqshada fidsan.
Naqshadeynta fidsan ee maanta waa mid aad uga fog asalkeedii. Tilmaamaha cusub, ee nuxurka leh ee naqshadeynta fidsan, Ryan Allen wuxuu ugu yeeraa 'Flat Design 2.0', wuxuu siiyaa fursado badan faahfaahinta iyo qurxinta. Halkan waxaa ku yaal tusaale shabakad leh isbeddelkan.
Animations awood leh.
ka animations kasbaday waajibaadyo iyo mas'uuliyado dheeri ah sanadkii 2015, gaarey wixii ka dambeeya qiimaha bilicsanaanta, si loogu adeego hawlo badan oo wax ku ool ahs, maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa ayaa soo jiita dareenka, animation-ku wuxuu saameyn ku yeelan karaa kala sarreynta muuqaalka wixii markii ugu horreysay la arkay. Saamaynta dhaqdhaqaaqa xayeysiin kara waxyaabaha qaarkood kuwa kale, oo leh awood wax looga qabanayo dhinacyada soo jireenka ah, sida cabirka ama midabka.
Animations sidoo kale waxay leeyihiin awood ay ku muujiyaan cilaaqaadka. Ka fikir saamayn animated agagaarka yaree daaqada, halka ay ku duusho ka dibna u duusho liiska, animation-kan ayaa xaqiijinaya guusha ugu horreysa ee ficilka, laakiin sidoo kale wuxuu muujinayaa isticmaalaha meesha ay ku jiraan menu-ka ay ka arki karaan daaqadda xigta.
Sawirro xiiso leh.
Iyada oo caan ka ah bandhigyada qeexitaanka sare Sannadkii 2015, naqshadeeyayaashu waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan tayada farshaxanka ee sawirrada. Bogag badan waxay ku tiirsan yihiin sawirro qurux badan oo loogu talagalay soo bandhigidda muuqaalka ah halkii ay ka ahaan lahaayeen sawirada dhijitaalka ah.
Ku buuxi asalka oo dhan hal sawir, halkaasoo websaydhku ka abuuro waayo-aragnimo heer sare ah isticmaalayaasha dhaqsaha badan ayaa sawiri kara, taas oo ka dhigaysa iyaga kaamil ah degitaanka iyo degitaanka bogagga.
Tusaale/Goobta Mario Frigerio
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qaar ka mid ah 5 isbeddellada qaabeynta websaydhka oo calaamadeeyay 2015